ဆိုဒ်လင့်များနှင့် ဆော့ဝဲ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာများ လေ့လာချင်သူများအတွက် ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
ဆိုဒ်လင့်များနှင့် ဆော့ဝဲ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာများ လေ့လာချင်သူများအတွက်
9:56:00 am ၀က်ဆိုဒ်များ No comments
onlinelover.weebly.com နည်းပညာရော အွန်လိုင်းရေဒီယိုနဲ့ သီချင်းလေးတွေဒေါင်းလုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ http://infinityblue.multiply.com/journal/item/2/2 ၉၀% ရပါသည် ဖွင့်မရတဲဝဘ်ဆိုက်များကိုဖွင့်လိုစေချင်ရင် http://mmsecurity.multiply.com/journal/item/2/2 http://makingburmarmultiply.multiply.com/journal/item/142 မာတီဆိုဒ်အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကောင်းပါတယ် www.anyartargroup.com အညာသားဆိုဒ်ပါ လေ့လာလို့ရတာတွေများပါတယ် http://api.ning.com/files/Q3i1caNsdEloGEaBl5CJ*0c9tttTG5IBjvVpBjYqr*XmV6w0gvcRGWfWLQbviX8i060CzZ5vZ-zmhrjG4t9nm7ZtdquRwhQP/UsefulWebsitefromAnyartar.swf အညာသားမာတီဆိုဒ်ကစုစောင်းထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေနဲ့ဆော့ဝဲတွေပါ http://toiletwall.ning.com/?xgsi=1 http://free-translator.imtranslator.net/speech.asp# ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်မှန်မမှန်သိရအောင် စစ်ကြည့်မယ် http://www.tvunetworks.com/downloads/player.html World Live TV Channel ကြည့် လို့ ရပြီပေါ့ http://www.malwarebytes.org/mbam.php Malware အတွက် ဆော့ဝဲလ် အသစ်ပါ..။ http://imtranslatorpro.ourtoolbar.com/ ဒေါင်းလွတ် ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်မှန်မမှန်သိရအောင် စစ်ကြည့်မယ် http://widgia.com/animated-dancers/ ကနေတဲ့ပုံလေးတွေလိုချင် http://www.zwani.com/ ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်ရင် http://www.wishafriend.com/calendars/ ပြက္ခဒိန်လှလှလေးတွေ ယူလို့ရတဲ့ဆိုဒ်ပါ http://www.wishafriend.com/clocks/ နာရီပုံလေးတွေယူလို့ရတဲ့ဆိုဒ်ပါ http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်.... http://www.thelist.com/countrycode.html#top နိုင်ငံများရဲ့ ကုတ်ကို သိချင်ရင်.... http://mmastrology.myanmarbloggers.org/ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ် http://chitoophoto.blogspot.com/ blog နှင့် I T နည်းပညာ http://www.deathclock.com/index.cfm ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား.... https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a...... ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း... http://sharingtofrds.blogspot.com/ နည်းပညာ အတွက် လေ့လာရန်... http://www.myanmarisp.com/computer_ict ကွန်ပြူတာ နဲ့ သတင်း နည်းပညာ.. http://www.imagechef.com/ ကိုယ့်ပုံလေးတွေနဲ့ Logo / Icon လေးတွေလုပ်ချင်ရင်.. www.twistynoodle.com သားသားမီးမီးတွေကို ဒဇိုင်းမျိုးစုံဆေးရောင်လှလှခြယ်လို့ရတဲ့စာမျက်နှာတွေအများကြီးရယူနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်ပါ http://photofunia.com/ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မြင်ဖို့..... http://www.topsecretemail.com/Encode_Message.cfm Email တွေကို လုံခြုံအောင် ပို့ကြမယ်.. http://www.passwordmeter.com/ သင်သုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား..စစ်ချင်ရင်... http://burglish.googlepages.com/fontconv.htm မြန်မာ တခြားဖောင့်မှ ဇော်ဂျီဖောင့် သို့ ပြောင်းချင်ရင်... http://burglish.googlepages.com/testarea.htm မြန်မာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်ရန်နေရာ... http://www.photoshoptalent.com Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ.. http://delicious.com/ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး website..တွေကို ရှာရန်.. http://www.mmphotoshop.net Photoshop ကိုမြန်မာလိုလေ့လာဖို့... http://www.whatismyipaddress.com Gtalk မှ နိုင်ငံ လိမ်ပြောသူများကို ဖမ်းဖို့... http://www.4shared.com/file/80626166/b5161ee5/GTunnel.html?cau2=403tNu... GTunnel.exe ကိုလိုချင်ရင်.... http://www.ultrareach.com/ ကျော်မယ် ၊ ခွမယ် ဆိုရင်.... http://www.yousendit.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၁) http://www.sendthisfile.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၂) http://www.send6.com ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၃) http://www.drhardware.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ..(၁) http://www.lavalys.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software...(၂) http://www.spadixbd.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ....(၃) http://technorati.com/ Blog တွေရဲ့စာရင်းကို ရှာချင်ရင်.... http://www.alpha.com.mm/alphaprice/alphaprice.php ကွန်ပျူတာ ဈေးနှုန်းတွက်ချင်ရင်... http://www.memtest86.com/ Memory ကိုစစ်ဖို့ software...... http://winkkk.com/glitters14_comments_Hearts_&_Love.html ချစ်သူအတွက် ပုံလှလှလေးတွေ ယူရန် http://www.heidi.ie/ Windows ကို မထိစေပဲ ဖိုင်တွေကို ဖျက်တဲ့ software........ http://www.download.com/ThreatFire-AntiVirus-Free-Edition/3000-2239... နဲ့ Virus ကိုရှင်းတဲ့ software..... http://www.gadwin.com/printscreen/Print Screen ဖမ်းတဲ့ Software... http://www.optimizingpc.com/index.html Software တွေ အစုံဆုံးနေရာ... http://www.abstradrome.com/ Hard Disk ကိုသွေးသစ်လောင်းတဲ့ software.. http://www.runtime.org/data-recovery-downloads.htm Hard Disk အတွက် Recover လုပ်တဲ့ software.... http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Partition-Magic.sh... Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software... http://www.heidi.ie/Window ကို မပါစေပဲ Hard Disk ကိုဖျက်တဲ့ software... http://www.customizetalk.com/ Gtalk အကြောင်းစုံစုံ သိချင်ရင်... http://www.vintelligence.blogspot.com/ Java အကြောင်းသိလိုသမျှ.. http://www.pcworld.com/ ကွန်ပျူတာ အကြောင်း ဘာထူးလဲ..(PC World).. http://www.zwani.com/ ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်ရင် http://www.ebooksbank.com/ E-Books တွေကူးဖိူ့... http://www.mediaringtalk.com ဖုန်းအလကားပြောရဖို့နေရာ...... http://www.w3schools.com/ ပရိုဂမ်သမားတွေအတွက်.... http://www.brothersoft.com/ Software တွေ ကူးမယ်ဆိုရင်... http://www.flashvortex.com/index.php စိတ်ဝင်စားစရာ စာလုံးလေးတွေ... http://www.books-hive.com မြန်မာ E-books တွေ.... www.myanmarengineer.org အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေးဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ နေရာ.. http://www.adobetutorialz.com Adobe ရဲ့ Photoshop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေလေ့လာစရာ www.mcpa.org.mm/ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်... http://www.reader.google.com Google reader တဲ့ဟေ့... အသုံးပြုနည်းကိုတော့ Blog နံပါတ် 46 မှာရေးထားပါတယ်.. http://free.avg.com/download-avg-anti-virus-free-edition AVG Antivirus Download အလကားရတဲ့နေရာ.... http://www.insideoe.com/resources/ Outlook Express ကိုပြင်တဲ့နေရာ... http://www.webroot.com/En_US/index.html Webroot Antivirus & Spyware Software ယူဖို့နေရာ.. http://www.mymyanmar.net/2g/ မြန်မာယူနီကုတ် အကြောင်းလေ့လာဖို့.. http://isoft.ygn.cc/ မြန်မာ့ ပညာရှင်များကို လေ့လာဖို့... http://www.softpedia.com/get/internet/E-mail/Mail/Utilities/Gmail-Mana... Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁) http://www.longfocus.com/firefox/ Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software ....(၂) https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:1/cat:5 Download Management လုပ်တဲ့ Software.. http://www.imtoo.com/dvd-ripper-platinum.html DVD ထဲက သီချင်းတွေကို ဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့ Software..(1) http://besweet.notrace.dk/ DVD ထဲက သီချင်းတွေ ဖြတ်တဲ့ တောက်တဲ့ Software..(၂) http://www.computeractive.co.uk/downloads/backup-and-recovery ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၁) http://www.objectrescue.com/download/ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၂) http://www.xilisoft.com/ DVD ဖြတ်တဲ့ Software... http://www.mp4converter.net/download.html?ID=1 MP4 လုပ်တဲ့ Software တွေ... http://www.dbpoweramp.com/ WAV မှ MP3 ပြောင်းပေးတဲ့ Software.. http://www.miksoft.net/comments.htm Video ဖိုင်တွေဖွင့်တဲ့ Software... http://www.cucusoft.com/ DVD ကူးတဲ့ Software တွေ.. http://www.softpedia.com/get/Antivirus/Trojan-Remover.shtml Trojan (ထရိုဂျန်) ကိုရှင်းတဲ့ Software... http://www.infinadyne.com/flashretriever.html Memory Card ထဲမှ ပုံတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ ၊ သီချင်းတွေ မှားဖျက်မိရင် ပြန်ယူပေးတဲ့ Software.. http://www.wnsoft.com/ ပုံတွေကို Album အလိုက်ပို့လို့ရတဲ့ Software... http://www.freedownloadscenter.com/Search/internet_cleaner.html Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တဲ့ Software... http://www.powerkaraoke.com/src/prod_karaokecdgcreatorpro.php ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ Software... http://www.lostpassword.com/ Password တွေကို ရှာပေးတဲ့ Software.. http://www.pcdocpro.com/ PC ထဲက အမှားတွေကို ပြတဲ့ Software ... http://www.acronis.com.sg/ Partition ချတဲ့ Software...(၁) http://www.partitionmanager.com/ Partition ချတဲ့ Software....(၂) http://www.soft32.com/download_151.html Partition ချတဲ့ Software....(၃)...(ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Software..ပေါ့.) http://www.styopkin.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပေးတဲ့ Software...(၁) http://www.fastphotorenamer.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပြောင်းပေးတဲ့ Software...(၂) http://www.infinadyne.com/download.shtml CD/DVD ကောင်းမကောင်း စမ်းတဲ့ Software.... http://www.download3000.com/download_27264.html ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software... http://www.manageengine.com/products/desktop-central/software-hardware... Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software... http://www.messx.net/download.php English - Myanmar အဘိဓာန် Software...(ဖုန်း ၊ PC တွေအတွက်ပါ ရတယ်..ဟဲဟဲ ပိုက်ဆံတော့ ဆောင်ထားပေါ့..) http://dictionary.all-channel.com/ English - Myanmar - English Online အဘိဓာန်...(၁) http://www.burmese-dictionary.org/ Myanmar-English-Myanmar Online အဘိဓာန်...(၂) http://www.ayinepan.com/literature/dictionary/ English - Myanmar အဘိဓာန်စာအုပ်.... http://www.monywa.org/fonts/index.htm English - Myanmar ဖောင့်များ..... http://www.mtvmusic.com/ MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်... http://www.keronsoft.com/ ပုံတွေအများကြီးကို တစ်ခါတည်း နာမည်ပြောင်းတဲ့ Software... http://www.acutesystems.com/ Mac မှ Window သို့ ဖိုင်ပြောင်းပေးတဲ့ Software.... http://www.spadixbd.com/ Program တွေ PC ထဲမှာ နေရာယူတာကို ကြည့်တဲ့ Software... http://www.axialis.com/download/iw.html Icon လုပ်တဲ့ Software... http://www.softfields.com/ ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တဲ့ Software..... http://www.lavasoft.de/ Adware ကိုရှင်းပေးတဲ့ Software... http://www.irfanview.com/ File အားလုံးကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Software... http://www.passmark.com/products/keytest.htm Keyboard ကိုစစ်တဲ့ Software... http://www.passmark.com/products/pt.htm Performance ကိုစစ်တဲ့ Software.... http://www.passmark.com/products/bit.htm PC ကို BurnIn စစ်တဲ့ Software... http://www.testlog.com/ Program တွေကို Test Plan လုပ်ပြီးစစ်ပေးတဲ့ Software.... http://www.passmark.com/products/wirelessmonitor.htm Wireless WiFi လုပ်ပေးတဲ့ Software... http://www.passmark.com/products/batmon.htm UPS & laptop computer battery တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software... http://www.passmark.com/products/monitortest.htm Monitor မှ CRT & LCD မျက်နှာပြင် ပုံရိပ်တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software.. http://www.passmark.com/products/modemtst.htm Modem ကောင်း ၊ မကောင်းစစ်ပေးတဲ့ Software... http://www.passmark.com/products/soundcheck.htm Sound Card ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software... http://www.passmark.com/products/oscheck.htm Operation System ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software... http://myanmaritpros.com/profiles/blog/show?id=1445004%3ABlogPost%3A67... ISA Server .ကိုမြန်မာလို လေ့လာဖို့.....(၁) http://myanmaritpros.com/group/smenetworking ISA server ကို မြန်မာလို လေ့လာဖို့...(၂) http://download.cnet.com/Active-SMART/3000-2086_4-10055071.html?part=d... Active SMART Software လိုချင်ရင်.. http://www.brothersoft.com/google-talk-shell-70998.html Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၁) http://www.softpedia.com/progDownload/google-talk-shell-Download-71248... Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၂) http://portableapps.com/apps/utilities/toucan USB drives တွေအတွက် Password ပေးတဲ့ software.. လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို Blog နံပါတ် 92 မှာ ရေးထားပါတယ်..။လေ့လာကြည့်ပါ...။လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..။ http://www.malwaresweeper.com/ malware တွေကို သတ်တဲ့ Software... http://www.mediafire.com/download.php?ym02owyxyxb Malware sweeper ဒေါင်းလို့ မရဘူးဆိုလို့... http://www.mediafire.com/download.php?mw20ofgdmll Memory Strick ထဲကဟာတွေကို ဖွတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်.... http://www.freepdfconvert.com/ pdf ဖိုင်တွေပြောင်းတဲ့ ဆောဝဲလ်...... http://sagarwarmyae.net/flash_songs/%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%... http://vn247.net/flash/Relax/drink-cafe.swf ကော်ဖီချင်ရင်သောက်ဖို့ပါ... http://www.buttonbeats.com/downloads.html ကီးဘုတ်တီးမလားဘာတီးမလဲ http://www.mtvmusic.com/ MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်... http://www.mtvmusic.com/ MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်... http://www.download3000.com/download_27264.html ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software... http://www.softfields.com/ ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တဲ့ Software.. www.ehow.com/how_2124668_remove-trojan-virus.htm ဗိုက်ရဒ် စကင်းများ free ဒေါင်းနိုင်သည် http://www.iminent.com/category/emoticons ဗိုက်ရဒ် စကင်းများ free ဒေါင်းနိုင်သည် http://www.ning.com Ning ၀က်ဆိုဒ်ပြုလုပ်နည်း www.worldenglishinstitute.org (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများအတွက် TOEFL အထောက်အကူပြုစာစဉ်ရရှိနိုင်သည်) www.shareme.com (ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ၊ စီးပွားရေးပညာရပ်များအပါအ၀င် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအကြောင်းစုံလင်စွာရရှိနိုင်သည်) www.learningpage.com (ဘာသာရပ်အတော်စုံပါသည်။ လူလတ်ပိုင်းများလေ့လာသင့်သည်) http://www.myanmarnlp.org.mm/index.php ( အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်စမ်းသပ်ရန်အတွက် အခမဲ့ ရယူနိုင်သည်) http://www.myanmarnlp.org.mm/index.php?option=com_content&view=... www.merriam-webster.com (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်) www.commerce-database.com (စီးပွားရေးစကားအသုံးများကို လေ့လာနိုင်သော အဘိဓါန်ဖြစ်သည်) www.computerweekly.com (နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းစုံဖော်ပြထားသည်) http://knowfree.net (စာအုပ်တော်တော်များများကို ဖတ်ရှုနိုင်၊ ကူးယူနိုင်သည်) www.fixya.com ( အလွန်ကောင်းပါသည် အိမ်သုံးလျှပ်စစ် ပစ္စည်းများအတွက်ပြင်ဆင်နည်း၊ အသုံးပြုနည်းများ အတော်စုံလင်ပါသည်) www.universalclass.com (အွန်လိုင်းပေါ်မှ အဝေးရောက်သင်ယူနိုင်သောတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်စနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်သင်ယူနိုင်သည်) www.houseofplant.co.uk (အိမ်တွင်းပန်းအလှဆင်နည်းပညာများအကြောင်းလေ့လာနိုင်သည်) www.thelinuxlab.net www.lpi.org (Linux စနစ်ကိုလေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲများ အကြောင်းလည်ပါရှိသည်) www.helpwithpcs.com (ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာများကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာတွေ့ရသည်) www.simplehelp.net (မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင် မေးမြန်းနိုင်သည်) www.asia-oss.net (Open Source စနစ်ကိုလေ့လာသူများ မဖြစ်မနေ၀င်လေ့လာသင်သည်) www.databasejournal.com (Database သီးသန့်စုစည်းထားသည်။ အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်သည်) www.wwpi.com (ကွန်ပျူတာပညာရပ်များအပြင်၊ Network ပညာများကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်) www.fstutorials.com www.psdfreebee.com (Photoshop နည်းပညာကို စလယ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများစွာဖြင့် လေ့လာနိုင်သည်) www.educational-software.com (ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်သည်) www.educationalsoftware.co.uk (ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို သင်ယူနိုင်သည်) www.okino.com (ဂရပ်ဖစ်သုံးဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များစွာကို လေ့လာနိုင်သည်) www.emailaccount.com (Domain များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံးချ အခမဲ့ရသော mail ဖြစ်သည်) www.gawab.com (Language များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး လွယ်ကူစိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail ဖြစ်သည်) www.inbox.com (သုံးအားကောင်းပြီး လိုင်းဝင်ထွက်လွယ်ကူမြန်ဆန်ကာ 5GB ပေးထားသော free mail ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်) www.hotmail.com (Microsoft မှ လွှင့်တင်ထားသော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်) www.mail.com (အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများစွာကိုရရှိသုံးစွဲနိုင်သည်) www.myway.com (အလှဆုံးသောပြင်ဆင်မှုများဖြင့် ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်) www.dora.com (၎င်းတွင်လည်း ပြင်ဆင်ပုံအလှတစ်မျိုးနှင့် မြင်တွေ့ရရှိနိုင်သည်) http://mail.yahoo.com (အတန်အသင့် နာမည်ရှိသော yahoo mail ဖြစ်သည်) www.eudora.com (နာမည်တော့ရှိပါတယ် မြန်မာပရိသတ်နည်းပါတယ်) www.30gigs.net (အခမဲ့ 30GB ရရှိနိုင်သော မေးလ် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်) www.picghost.com ပုံအများကြီးကို တပြိုင်နက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ဆိုဒ်ပါ www.presentationmagazing.com အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့သူတွေလေ့လာသင့်တဲ့ဆိုဒ်ပါ Power Point Template တွေထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ ရုပ်ပုံတွေအများကြီးပါ၊ www.idiomdictionary.com အီဒီယမ်အဘိဓာန်ပါ၊ အခမဲ့သုံးနိုင်တဲ့ဆိုဒ်ပါ၊ search bar မှာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်၊ www.thefreesite.com ဆိုက်ပေါ့နော်။ အကုန်လုံး free ရတယ်ပြောတာပဲနော်။ http://www.ramonnya.co.cc ဒီဆိုက်ကတော့မွန်အကြောင်းထင်တာပဲနော်။ယူထားလိုက်။ http://www.www.printfree.com လက်ကမ်းစာစောင်လေးတွေ ပြုလုပ်မယ်၊့ http://www.finereader.abbyy.com ပုံနဲ့စာသားတွဲနေတာကို ခွဲထုတ်ကြရအောင် http://www.acronymfinder.com ကွန်ပြူတာ အတိုကောက်စာလုံးတွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင် http://www.portableapps.com အသုံးဝင်ဆုံး Application တွေရယူလိုက်ရအောင် http://www.xoslab.com Folder တွေကို တခြားသူမမြင်အောင် Lock ချမယ်၊ ကွန်ပြူတာမှာရှိတဲ့ဖိုင်တွေကို သူများဝင်ကြည့်တာမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ၊ http://www.course.com ကွန်ပြူတာလေ့လာတတ်မြောက်လိုသော ကျောင်းသားများအတွက် http://www.phpeasystep.com PHP လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လေ့လာရအောင် http://www.downloadatoz.com ကွန်ပြူတာသမားတွေအတွက် အသုံးဝင်ဆော့ဝဲများ http://www.baycongroup.com/tutorials.htm ကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေ လေ့လာမယ် http://www.computerbooks.com နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးတွေ ရှိတဲ့နေရာပါ အောက်ကဆိုက်တွေကတော့ကောင်းတယ်ဗျ။ www.wiki-mysteryzillion.org www.edu-mysteryzillion.org ဒီဆိုက်ကတော့နည်းပညာအခမဲ့သင်တယ်ပြောတာပဲနော်။ www.mmopenxteam.com ဒီဆိုက်ကတော့ဘာသာပြန်တွေများပါတယ်နော်။ www.mmenglish.net ဒီဆိုက်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးပါ။ကိုဇေတို့ကတော့အမြဲတမ်းကြည့်ပါတယ်။ www.ornagai.com ဒါကတော့အဘိဓာန်တွေဝေငှပေးတယ်နော်။ အကုန်လုံးပေါ့။ www.dems.net.mmဒီဆိုက်ကတော့ကိုယ့်စာရောက်မရောက်ကြည့်လို့ရတယ်ပြောတယ်နော်။ codeနံပါတ်နဲ့ကြည့်လေ။အမြန်ချောစာမှကြည့်လို့ရတာနော်။ www.myanmartraining.com ဒါလဲကောင်းတာပဲ။ ဖိုင်များတင်နိုင်သော ဆိုဒ်များ • http://www.fileden.com/ • http://www.filefactory.com/ • http://www.filexoom.com/ • http://www.ripway.com/ • http://www.pages.google.com/ • http://www.mediafire.com/ • http://files-upload.com/ • http://www.wikiupload.com/ • http://upload2.net/ • http://www.filecrunch.com/ • http://www.ifile.it • http://www.zshare.net